A ga-akwụ ụgwọ ụgwọ ọkụ eletrik ma ọ bụrụ na a zutere ebumnuche mbelata CO2 | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
A ga-akwụ ụgwọ ụgwọ ọkụ eletrik ma ọ bụrụ na a zutere ebumnuche mbelata CO2
Daniel Palomino | | Nchekwa ike, Noticias
Ọ bụrụ na ebumnobi ndị edobere na Mbelata nke ikuku CO2 emezuru Anyị nwere ike ịhụ mbelata dị ukwuu na ọkụ eletrik n'ụlọ anyị ruru 55%.
Nke a bụ n'ihi ike uto na oku eletrik na, enwetara site na usoro ntinye eletrik dị ugbu a iji mezuo ebumnuche decarbonization, ga-enwe ike ịbelata mbelata ọkụ eletrik nke a 35% site na 2030 wee rue 55% na 2050, dị ka ya si kwuo Nyochaa akụkọ Deloitte.
Dịka elekwasị anya na njem iji belata ikuku CO2, ihe eji ekpo oku nke eji eme ulo ha bụkwa akụkụ nke usoro a.
Alberto Amores, onye mmekọ Monitor Deloitte gosipụtara n'oge ngosi nke ọmụmụ a:
"Ọ bụghị ọrụ naanị maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ nchịkwa, ezinụlọ ga-etinyekwa aka, ebe ọ bụ na iwu ụlọ (obibi na ọrụ) maka akụkụ dị oke mkpa nke oriri na ume ọkụ nke mba ahụ."
Maka nghọta, ụzọ dị mfe iji kọwaa ya bụ na ụlọ obibi dị ọkọlọtọ nwere ike belata ike oriri site na 40%.
Meanszọ iji mezuo nke a nwere ike ịbụ site na mgbatị zuru oke ma ọ bụ, ọzọ, na iji mgbapụta ọkụ eletrik, nke ga-apụta 4 ugboro dị ọnụ ala karịa nhazigharị.
Nkwupụta ahụ edepụtara n'elu na-akọwapụta ọnọdụ 4 dị iche iche maka afọ ole na ole sochirinụ:
Mee ka akụnụba akụ na ụba.
Mbelata nke Nkịtị.
High Ọdụdọ arụmọrụ.
Mbelata ihe ọkụkụ CO2, ebumnuche
Ọnọdụ ahụ akpọrọ "High Electrical arụmọrụ" bụ naanị nke enwere ike ịhapụ ịbute ebumnuche edoziri maka mbibi.
N'ịtụle nnukwu ọkụ eletrik nke akụ na ụba na omume siri ike na arụmọrụ ike, ọ bụ naanị ya nwere ike izute ebumnuche nke mbenata ikuku CO2 nke Europe na-atụle ugbu a.
Agbanyeghị, na-ele ọnọdụ ndị ọzọ anya, ọ bụ "Onye na-aga n'ihu" nke gara n'ihu dịka ọ dị ugbu a (karịa ma ọ bụ obere) n'ihe metụtara ibu mmanụ ala na ngwa ndị ọzọ metụtara arụmọrụ ike.
Nyochaa Deloitte isi:
“Ọ bụ ezie na ọnọdụ“ Elu Elu Elu ”dị n’ enyo na-egosi itinye ego nke ukwuu karịa “Onye na-aga n’ihu”, ogologo oge ọ gụnyere oke nchekwa na mbubata mmanụ ọkụ, nke e mere atụmatụ na gburugburu 380.000 nde euro; n'ihi ya, decarbonized dịruru ná njọ nwere ike ịbụ ọbụna dị ọnụ ala karịa na ngụkọta akwụ ụgwọ karịa "Continuista".
Kpọmkwem, a na-eme atụmatụ na ọnọdụ "ọkụ eletrik dị elu" gụnyere ngụkọta nke ntinye ego 510.000 nde n'etiti 2017 na 2050 na mmefu na mbubata hydrocarbon nke ihe dị ka nde 620.000, ebe na "Continuga n'ihu", a ruru 200.000 nde. Ijeri 1 na emefu na mbubata mmanụ na gas ”.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » A ga-akwụ ụgwọ ụgwọ ọkụ eletrik ma ọ bụrụ na a zutere ebumnuche mbelata CO2
Ndị na-eri nke ọkụ eletrik na onu ogugu enwere ugbua
Ubi obodo ndị mepere emepe nwere ike ibute nsogbu ahụike